किन तपाईंको कम्पनीले एक CMS लागू गरेको छैन? | Martech Zone
किन तपाईंको कम्पनीले एक CMS लागू गरेको छैन?
शनिबार, अक्टोबर 17, 2009 शनिबार, अक्टोबर 24, 2020 Douglas Karr
अप्टिमाइजेसन, रूपान्तरण अप्टिमाइजेसन, इनबाउन्ड मार्केटि,, खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन ... को बारेमा यस ब्लगमा धेरै छलफलहरू छन्। मल्टिभेरिएट परीक्षण र ल्यान्डि page पृष्ठ अप्टिमाइजेसन। कहिलेकाँही हामी यो बिर्सन्छौं कि धेरै साइटहरू अझै १ !'s ० को दशकमा छन् र हार्ड-कोडेड HTML पृष्ठहरू सर्वरमा अपरिवर्तित बसिरहेका छन्!
एक CMS हो सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली। यो गैर-प्राविधिक प्रयोगकर्ताहरूलाई HTML, FTP, जाभास्क्रिप्ट वा सयौं अन्य प्रविधिहरू नजान्ने बनाउन, तिनीहरूको वेब साइट निर्माण, मर्मत र अपडेट गर्न अनुमति दिन्छ। गत हप्ता, मैले कुनै पनी मेजबानी नगरी परोपकारबाट फ्र्यान्टिक कल प्राप्त भयो यदि मैले उनीहरूको घटनाहरू पृष्ठ अपडेट गर्न सक्दिन भने वेब मान्छे अनुपलब्ध थियो।
मैले FTP मार्फत लग इन गरे, फाईल डाउनलोड गरे र ड्रीमविभर मार्फत आवश्यक सम्पादनहरू गरे। तब मैले तिनीहरूलाई व्याख्यान दिएँ कि यो सबै काम साँच्चै अनावश्यक थियो। अर्को भर्खरको ग्राहकले उनीहरूको मार्केटरलाई HTML प्रशिक्षणमा पठाउँदै थिए ताकि तिनीहरूले आफ्नो साइट अपडेट गर्न सकून्। यो पनि अनावश्यक थियो। जबकि वेब टेक्नोलोजीको ज्ञान सहयोगी हो, राम्रो सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीले तपाईंको कम्पनीलाई दैनिक साइट अपडेट गर्न आवश्यक सबै उपकरणहरू प्रदान गर्न सक्दछ जब शिक्षा र प्राविधिक अवरोधहरू हटाउँदै।
वर्गहरूको लागत वा जारी भुक्तानको लागि वेब मान्छे, यी कम्पनीहरूले नियन्त्रण गर्न सक्ने एक मजबूत सामग्री प्रबंधन प्रणाली लागू गर्न सक्दछन्।
त्यस्तै एक ग्राहकको लागि, पेपर-लाइट, एक कागजात व्यवस्थापन प्रणाली प्रदायक, हामीले WordPress प्रयोग गर्‍यौं। त्यहाँ बजारमा अन्य सक्षम सामग्री व्यवस्थापन समाधानहरू छन्, तर योसँग सबै घण्टी र सिट्टीहरू थिए र ग्राहकको आवश्यकताहरूसँग सजीलो अनुकूल छ।
वस्तुतः प्रत्येक डोमेन रेजिस्टरले अब उनीहरूको आफ्नै सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली प्रस्ताव गर्दछ वा अन्य सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरूको स्वत: स्थापना गर्दछ। मेरो सल्लाह केवल एक प्लेटफर्ममा टाँस्नको लागि जुन व्यापक अपनन र यसको साथ एक विशाल विकास समुदाय।
दिमागमा राख्नुहोस् कि एक नि: शुल्क सीएमएस स्थापना स्वतन्त्र छैन, यद्यपि। रखरखाव अपग्रेड हुनै पर्छ! नि: शुल्क सीएमएस ब्लकमा ठुलो केटा हुनुले आफैलाई अझ अपराधीहरूलाई उधारो दिन्छ तपाईंको प्लेटफर्म ह्याक गर्नुहोस्। एक सस्तो होस्टिंग प्लेटफर्ममा होस्ट गरिएको एक नि: शुल्क सीएमएस पनि एक टन ट्राफिक प्रतिरोध गर्दैन - तपाईंलाई आवश्यक छ तपाईंको पूर्वाधार गोमांस.
यी जोखिमहरू भन्दा बढी फाइदा हुनेवाला छ यदि तपाईंसँग आफ्नो CMS स्वस्थ राख्नको लागि एक राम्रो कुशल मानिस छ भने। CMS स्थापना र कन्फिगरको साथ साथ:
हामीले केही ब्याक-ईन्ड गर्‍यौं खोज ईन्जिनका लागि अनुकूलन सहि प्लगइनहरू र विषयवस्तु ढाँचाको साथ।
We लगइन पृष्ठ अनुकूलित त्यसोभए उनीहरूका ग्राहकहरू सक्थे लगईन गर्नुहोस् र प्रतिबन्धित सामग्री हेर्नुहोस्.
हामी कन्फिगर र एक ट्वीक ग्राहक उद्धरणहरू घुमाउन उद्धरण प्लगइन गृह पृष्ठ फुटरमा।
हामीले किनेको र स्थापित गरेको ए बलियो फार्म समाधान ताकि तिनीहरूले कब्जा गर्न सके इनबाउन्ड मार्केटिंग लेड्स.
पुरानो लिंकलाई उही सामग्रीमा पुनः मार्गनिर्देशन गर्न हामी htaccess फाईल अपडेट गर्‍यौं। हामी पनि एक स्थापित पुनर्निर्देशन प्लगइन अतिरिक्त पुनर्निर्देशन आवश्यकताहरू ह्यान्डल गर्न। यो प्राय: एक कदम हो जुन उपेक्षा गरिन्छ वेब डिजाइनरहरू द्वारा र तपाइँको अनुकूलन मार्न सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पुरानो लिंकले अझै काम गर्दछ ... केवल नयाँ सामग्रीमा औंल्याउनुहोस्!
हामीले विषयवस्तुहरू र प्लगइनहरू स्थापना गर्यौं ताकि साइट उत्तम रूपमा रेन्डर हुनेछ आईफोन, आईपड टच र अन्य मोबाइल उपकरणहरू। व्यक्तिहरूले मोबाइल ब्राउजरलाई अधिक र अधिक ब्राउज गर्न प्रयोग गरिरहेका छन् ... के तपाइँको साइट यी उपकरणहरूमा पठनीय छ?
हामीले कन्फिगर गरेका छौं breadcrumbs गहिरो नेभिगेसनको साथ साइटका सेक्सनहरूमा ताकि ग्राहकहरू सजिलै नेभिगेट गर्न सक्दछन्।
अवश्य पनि, हामीले वेबमास्टरहरू, तथ्या plug्कहरू प्लगइनहरू, र एनालिटिक्स कन्फिगर गर्यौं ताकि कम्पनीले यसको ट्राफिक मोनिटर गर्न सक्दछ।
सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, हामी कम्पनीलाई नयाँ प्लेटफर्ममा लागू गर्न र यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न मद्दत जारी राख्छौं। वर्डप्रेस जस्ता सीएमएस पहिले एक अलि बढी डरलाग्दो हुन सक्छ। म तपाईलाई आश्वस्त गर्न सक्छु कि FTP र HTML व्याख्या गर्नु भन्दा धेरै सजिलो छ, यद्यपि!
अन्तमा, जे होस् वर्डप्रेस एक योग्य ब्लगि platform प्लेटफर्म हो, मँ इमान्दारै विश्वास गर्दछु कि यो अझ राम्रो वेबसाइट सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली हो। सफ्टवेयर एक सेवा समाधान जस्तै को रूप मा छ मार्केटपथ त्यो प्रस्ताव साइट प्रबन्धन, ब्लगिंग, र ecommerce।
टैग: CMSसामग्री व्यवस्थापनसामग्री व्यवस्थापन प्रणालीसामग्री मार्केटिङ
तपाईंको ब्रान्ड सोशल मिडियामा हुनुपर्दछ
Alterian सामाजिक मीडिया मार्केटिंग काउन्सिल स्थापना गर्दछ
अक्टोबर 21, 2009 बिहान 12:42 बजे
राम्रो भन्नुभयो, डग।
मैले धेरै व्यवसाय मालिकहरूसँग यो गत शताब्दीको रूपमा गरेको जस्तै अनुभवहरू पाएको छु, यो पनि सत्य हो:
"वर्डप्रेस जस्तो CMS सुरुमा अलि डरलाग्दो हुन सक्छ।"
साना व्यवसाय मालिकहरू, विशेष गरी, CMS धेरै काम खोज्नुहोस्। यदि तपाईं आफ्नो व्यवसाय चलाउन व्यस्त हुनुहुन्छ र हरेक पटक केहि नयाँ पोस्ट गर्नुहुन्छ भने सम्झनु पर्ने धेरै कुराहरू छन्। तपाईंले फेरि CMS प्रयोग गर्नको लागि वरिपरि पुग्दा, तपाईंले यसलाई कसरी गर्ने भनेर बिर्सनुभयो। र कसले म्यानुअल पढ्न चाहन्छ?
वर्डप्रेस पक्कै पनि सामान्य प्रशासक उपयोगिता को मामला मा Joomla वा Drupal भन्दा धेरै राम्रो छ। कार्यप्रवाह अन्य दुईको तुलनामा अधिक सहज छ।
साना व्यवसाय मालिकहरूका लागि CMS को साथ तपाईंको अनुभव कस्तो छ? के तपाईंले "सरल" विकल्पहरू प्रयास गर्नुभएको छ?